दलान नेपाल : अन्योलमा मधेश
at 5:17 AM Posted by Dalan
काठमाडौमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले मधेशमा आन्द्योलन गरेर सतापक्षलाई झुकाउने भाषण गरिरहदा मधेश चाही अन्योलमा देखिन्छ । दोस्रो संंविद्यानसभामा मधेशी पार्टीहरु तथा एमाओवादीहरुको पराजय भोगेका थिए । दोस्रो संविद्यानसभामा संविद्यान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भए संगै दलहरु दुई ध्रुवमा विभाजित छन । मधेशी पार्टीहरु पुछार लगेर एमाओवादी आन्द्योलनमा जाने मनस्थिती बनाएको देखिन्छ । दोस्रो संविद्यानसभामा पराजय भेगेका मधेशी पार्टीहरु मधेशमा आन्द्योलन भयो भने आफनो शक्ति पुर्नगठन हुने आकंलनमा छन ।
नवलपरासी बस्ने मधेशमा एक जना अगुवा वुद्धजिवी कौशलेन्द्र श्रीवास्तव भन्छन, मधेशी पार्टीहरुले भने जती सजिलो आन्द्योलन छैन । श्रीवास्तव भन्छन, मधेश अन्योलमा छन । मधेशमा पछिल्ले समयमा भईरहेको अनेकन गतिविधीले मधेशलाई थप अन्योलग्रस्त बनाउदै लगेको देखिन्छ, जुन कुनै पनि प्रकारले विष्फोटन हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा मधेशमा एक साथ अनेकन अभ्यासहरु जारी छन । गएको सेफटेम्बरमा प्रहरीले सिके राउतलाई समातेपछि मधेशका जिल्लाहरुमा उनको गतिविधीहरु पनि तीव्र रुपमा भइरहेको देखिन्छ । पुर्व एमाओवादीका एक जना अगुवा मातृका यादव पछिल्लो समयमा संयक्त मधेशी राष्टिय आन्द्योलन समिती बनाएर मधेशमा सक्रिय छन । गएको एक बर्ष भन्द्या अघि देखि नै जेपी गुप्ता तराई मधेश राष्टिय अभियान बनाएर मधेशमा छुटै सक्रिय छन । मधेशी पार्टीहरुको आ आफनै स्थान छदै छन । दोस्रो संविद्यानसभाको सेरोफेरोमा मधेश केन्द्रित सशस्त्र समुहको केही प्रमुख नाईकेहरु पक्राउ परे पछि मधेशमा सशस्त्र समुहहरु नै सकियो भन्ने एक खालको आकंलन थियो । तर हालै मधेशका केही जिल्लाहरुमा जयकृष्ण गोईतको संगठनहरुको समेत पुर्नगठन हुने कामहरु भएको छ ।
श्रीवास्तव भन्छन, मधेश राजनितीको धरातलीय मनोविज्ञान परिवर्तन हुदै छ । जसलाई मधेशी पार्टीहरुका नेतृत्वहरुले अझै आत्मसाथ गरेको पाईदैन । जसका कारण सिके राउत जस्ता पक्षहरुलाई मजवुत हुने खतरा मधेशमा वढेर गएको देखिन्छ । उनी यसमा अर्को प्रमुख गल्ती गर्नेमा वर्तमान सतापक्षलाई देख्छन । उनी भन्छन, संघियता सहित नयां संविद्यान जारी भएको भए वातावरण विस्तारै अर्कौ बन्दै जाने थियो, तर अहिले आएर संघियतामा विवाद हुनुले मधेशमा सिके राउतका अभियानीहरु हौसिएका छन ।
कपिलवस्तूका अधिकारकर्मी रवी ठाकुरको बुझाईमा मधेशमा सतापक्षहरु प्रति तीव्र आक्रोश छ । ठाकुर भन्छन, खासगरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो केही अभिव्यक्तिहरुले मधेशलाई तीव्र असन्तुष्ट बनाएको छ । ओली र मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्ष विच प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भनाभन हुने गरी नै झगडा परेको थियो ।
संघियतामा मधेशी पार्टीहरु सहित एमाओवादी एक ठाउमा देखिन्छन भने काग्रेस एमाले एक ठाउमा उभिएको छ ।
पहिलो मधेश आन्द्योलनको क्रममा फोरम नेपालको पश्चिमी कमाण्ड सम्हाले चक्रधारी पाण्डे भन्छन, संघियतामा तलमाथी भए आन्दोलन त हुन्छ तर अबको आन्द्योलनको वर्तमान मधेशी नेतृत्वहरुको समेत हिसाव किताव हुन्छ ।
संघीयतामा देखिएको विवादको केन्द्रमा पनि छन मधेश । मुख्यगरी मधेशका पुर्वी जिल्लाहरु झापा, मोरड र सुनसरी तथा पश्चिमी जिल्लाहरु कैलाली र कन्चनपुरका लागी विवाद देखिएका छन । काग्रेस एमाले यी जिल्लाहरु लाई पहाड संग जोडन चाहन्छन भने मधेशी पार्टीहरु मधेश प्रदेशमै राख्नका लागी अडान लिदै आएका छन ।
एक मधेश प्रदेशको आफनो माग वाट लचक हुदै दुई मधेश प्रदेशमा झरेको मधेशी पार्टीहरु लागी ‘गर या मर’को अवस्था छ । काग्रेस एमाले संख्यात्मक हिसावले अहिले आफुहरु मजवुत भएको दम्भमा मधेश आन्दोलनको म्यान्डेड उल्टाउने पक्षमा देखिन्छ । जुन मधेशी नेतृत्वहरु भन्दा सम्रग मुलुकका लागी अहितकर हुने कुरा काग्रेस एमाले नेतृत्वले अहिले वुझेका छैन वा बुझ पचाईरहेका छन ।
मधेशमा पछिल्लो समयमा अभिव्यक्त भईरहेको विभिन्न विचार र गतिविधीलाई मुल्याकंन नगर्नु काग्रेसको परम्परागत कमजोरी हो भने एमालेको वलमिच्याए । यस्तै अनेकन वलमिच्याइका कारण एमाओवादीले मधेशमा व्यापक क्षती व्योहोरेका थिए ।
त्यसैले दुई मधेश प्रदेशमा सहमत हुन तयार मधेशी पार्टीलाई अनाहकमा किचोलेर नयां संविद्यान जारी गर्न ढिलाईमा काग्रेस एमाले जानु हुदैन । यसले कसलाई कति क्षती वा फाईदा हुन्छ, त्यो पछि को कुरा हो ? तर एउटा कुरा निश्चित के छ भने यसले मधेशलाई थप अस्थिरताको भुमुरीमा धकेल्ने छ । र मधेशलाई भडकन बेर लाग्ने छैन । जुन सबैका लागी धातक हुन्छ ।
सदभावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंहसंग लामो संगत गरेका श्रीवास्तव भन्छन, सदभावना पार्टीले संघियताको कुरा गर्दा कुन अवस्था थियो तर आज के अवस्था छ ? यसलाई ख्याल गर्नु पर्छ अन्यथा भोली हामी राजनितीक रुपमा काहा पुग्ने छौ त्यो कुनै ठेगान छैन । नेपालको मुल धारको राजनिती प्रति अहिले पनि मधेशीहरु अपनत्व ठान्दैन, यसलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, उनी प्रश्न गर्छन । श्रीवास्तवका अनुसार काग्रेस एमालले संघियता विनाको नयां संविद्याँन जारी गर्न अघि वढेको आम बुझाई छ ।
यही परिपेक्ष्यमा १६ फागुन पछि मधेशी पार्टीहरु तथा एमाओवादीहरु निर्णयक आन्द्योलन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन । त्यो आन्द्योलन कस्तो होला त्यो त अहिले नै भन्न सकिन्न । तर विस्तरै आक्रोशित गएको मधेशको मेड भडकियो भन्ने धनजनको व्यापक क्षती र अवस्था पुरै अनियन्त्रित पनि हुन सक्छ । दोस्रो संविद्यानसभाको नतिजा लगतै मधेशमा सुरु भएको अनेकन उकुसमुकुसले पछिल्ले समयमा पाएको राम्रो मलजलले कसलाई कति फाईदा वा घाटा गर्छ त्यो पछि हिसाव किताव हुदै गर्छन तर अहिले मधेश पुरै देशलाई चाही अस्तव्यस्त बनाइएदिन्छ ।